GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bicol Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
OLEE otú otu nwoke nke nwere ọtụtụ nsogbu mgbe ọ bụ nwata si ghọọ ezigbo di na ezigbo nna ma na-enwe obi ụtọ ugbu a? Gịnị nyeere otu nwaanyị nke mere ọtụtụ ihe ọjọọ aka ịgbanwe ndụ ya? Gụọ ihe ha kwuru.
‘Ọ dị m ka ndụ m enweghị isi.’​—VÍCTOR HUGO HERRERA
NDỤ M BIRI: ABỤ M ONYE AṄỤRỤMA
NDỤ M BIRI NA MBỤ: A mụrụ m n’Angol. Angol bụ obodo mara mma nke dị n’ebe ndịda mba Chili. Amaghị m papa m. Mgbe m dị afọ atọ, mama m kpọ mụ na nwanne m nwoke gaa biri na Santiego, bụ́ isi obodo Chili. Anyị bi n’otu mkpakara ụlọ e wuuru ndị na-enweghị ụlọ. Anyị na-aga mposi n’ebe mmadụ niile bi ná mkpakara ụlọ ndị ahụ na-aga mposi. Ebe anyị si enweta mmiri bụ n’ebe ụlọ ọrụ na-agbanyụ ọkụ si amịta mmiri ha ji agbanyụ ọkụ.
Mgbe afọ abụọ gachara, gọọmenti nyere anyị otu obere ụlọ. Ma ọ dị mwute na ọtụtụ ndị agbata obi anyị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ, na-aṅụbiga mmanya okè, na-eme mpụ ma na-agba akwụna.
Otu ụbọchị, mama m hụrụ otu nwoke n’ebe ahụ. Ya na nwoke ahụ mechara lụọ. Nwoke ahụ bụ onye aṅụrụma. Ya ṅụchaa mmanya, ya akụọ mụ na mama m ihe. Ọtụtụ mgbe, m na-aga otu ebe nọrọ na-ebe ákwá, ya adị m ka ya bụrụ na m nwere papa ga-anapụta m n’aka nwoke a.
Anyị dara ogbenye n’agbanyeghị na mama m na-eme ihe niile o nwere ike ime ka ọ kpaa afọ anyị. Mgbe ụfọdụ, anyị anaghị enwe ihe oriri, naanị ihe anyị na-eme bụ ịṅụ mmiri ara ehi na ịracha sụga. Mgbe ọ bụla mụ na nwanne m nwoke chọrọ ilegharị anya, anyị na-ezoro ezoro gaa na windo otu onye agbata obi anyị, kwụrụ ebe ahụ na-ele tiivi. Ma otu ụbọchị, onye agbata obi anyị ahụ jidere anyị, anyị akwụsịzie ịga ebe ahụ.
Mgbe nwoke ahụ lụrụ mama m na-aṅụghị mmanya, ọ na-azụtara mụ na nwanne m nwoke ihe anyị ga-eri. Otu ụbọchị, ọ zụtaara anyị obere tiivi. O so n’ihe ole na ole m nwere ike icheta metụrụ m obi ụtọ.
Mgbe m dị afọ iri na abụọ, m mụtara otú e si agụ ihe. Mgbe otu afọ gafere, m kwụsịrị ịga akwụkwọ ma malite ịrụ ọrụ. Ọ na-abụ anyị gbasaa ọrụ, m na-eso ndị torola eto mụ na ha na-arụkọ ọrụ aga oriri na nkwari. Anyị gaa ebe ahụ, anyị na-aṅụbiga mmanya okè, ṅụọkwa ọgwụ ike. Obere oge, ịṅụ mmanya na ọgwụ ike bịara rie m ahụ́.
Mgbe m dị afọ iri abụọ, mụ na otu nwa agbọghọ aha ya bụ Cati bidoro ịkpa. Anyị mechakwara lụọ. Mgbe anyị lụchara, anyị bi n’udo, ihe niile na-agazikwa agazi. Ma obere oge, m malitekwara ibi ndụ ọjọọ ahụ m na-ebibu. M bịaziri kpawa àgwà ọjọọ karịa ka m na-akpabu. Ọ bịara doo m anya na àgwà ọjọọ ahụ ga-ata isi m ma ọ bụkwanụ mee ka m gaa mkpọrọ. Nke ka njọ bụ na àgwà ọjọọ ahụ m na-akpa na-akpatara nwa m nwoke bụ́ Víctor ụdị nsogbu ndị m nwere mgbe m bụ nwata. Ihe a mere ka obi na-ajọ m njọ, ya adịkwa m ka ndụ m enweghị isi.
N’ihe dị ka afọ 2001, Ndịàmà Jehova abụọ bịara n’ụlọ anyị, ha na nwunye m bidokwara ịmụ Baịbụl. Ọ kọọrọ m ihe ndị ọ na-amụta. Ọ bịara na-agụ m agụụ ịmụta ihe ndị ahụ a na-akụziri ya. N’ihi ya, m bidokwara ịmụ Baịbụl. N’afọ 2003, e mere nwunye m baptizim, ya aghọọ Onyeàmà Jehova.
OTÚ BAỊBỤL SI GBANWEE NDỤ M: Otu ụbọchị, m gụrụ Rut 2:12. Ebe ahụ kwuru na Jehova na-akwụ ndị nwere okwukwe n’ebe ọ nọ na ndị na-efe ya ezigbo ụgwọ ọrụ. M bịara ghọta na ọ bụrụ na mụ ahapụ ndụ ọjọọ m na-ebi ma mewe ihe dị Chineke mma, ọ ga-akwụkwa m ezigbo ụgwọ ọrụ. M chọpụtara na Baịbụl kwuru ọtụtụ ugboro na ịṅụbiga mmanya okè adịghị mma. Ihe e kwuru ná 2 Ndị Kọrịnt 7:1 metụkwara m n’ahụ́. Ebe ahụ kwuru “ka anyị sachapụ onwe anyị mmerụ niile.” Nke a mere ka m malite ịhapụ àgwà ọjọọ ndị m na-akpa. Ozugbo m malitere ịhapụ ha, m bịaziri na-ewe iwe ọkụ karịa otú m na-ewebu. N’oge niile ahụ, nwunye m nyeere m ezigbo aka.
M mechara kwụsị ọrụ m na-arụ n’ihi na ndị mụ na ha na-arụ ọrụ na-eme ka o siere m ike ịkwụsị ịṅụ sịga na ịṅụbiga mmanya okè. Ọ bụ eziokwu na ọrụ ahụ m kwụsịrị mere ka anyị ghara ịna-akpata ego otú anyị sibu akpata, ma o mere ka m nwekwuo ohere ịmụ Baịbụl. Ọ bụ mgbe ahụ ka m malitere iji ife Chineke kpọrọ ihe. Nwunye m anaghị ana m ego karịa otú m nwere, ọ naghịkwa akparị m maka na anyị enwekwaghị ego. Obi dị m ụtọ na o nyeere m ezigbo aka.
Mụ na Ndịàmà Jehova ji nke nta nke nta kpachiwe anya. Ha mere ka m ghọta na n’agbanyeghị na mụ agụchaghị akwụkwọ, obi dị Jehova ụtọ na m ji obi m niile chọọ ife ya. Otú ahụ Ndịàmà Jehova si hụ ibe ha n’anya ma dịrị n’otu baara ezinụlọ anyị ezigbo uru. O nwetụbeghị ndị anyị hụrụ dị n’otu ka Ndịàmà Jehova. N’ọnwa Disemba n’afọ 2004, e mekwara m baptizim.
URU NDỊ M RITERELA: Ahụla m na ihe Jehova kwuru n’Aịzaya 48:17 bụ eziokwu. Ebe ahụ kwuru, sị: “Mụ onwe m, Jehova, bụ Chineke gị, Onye na-akụziri gị otú ị ga-esi baara onwe gị uru.” Otú ndụ m si gbanwee mere mama m na nwanne m nwoke obi ụtọ nke na ha amalitela ịmụ Baịbụl ugbu a. Obi tọdịrị ndị agbata obi anyị ụtọ mgbe ha hụrụ na mụ agbanweela, hụkwa na anyị na-enwe obi ụtọ ugbu a n’ezinụlọ anyị.
Obi dị m ụtọ na nwunye m hụrụ Chineke n’anya. Mụ na ya bụ nnụ na mmanụ, ọ tụkwasịkwara m obi. N’agbanyeghị na amaghị m nna m, Baịbụl akụzierela m otú m ga-esi zụọ ụmụ nwoke atọ m mụrụ. Ha na-akwanyere m ùgwù. Nke ka nke bụ na ha amatala onye Jehova bụ, ha hụkwara ya n’anya.
M na-ekele Jehova na n’agbanyeghị nsogbu ndị m nwere mgbe m bụ nwata, o meela ka obi na-atọ m ụtọ ugbu a.
‘M na-ewe iwe ọkụ ma na-esekarị okwu.’—NABIHALAZAROVA
ABỤ M ONYE: BỌLGERIA
NDỤ M BIRI: M NA-ERE ỌGWỤ IKE
NDỤ M BIRI NA MBỤ: A mụrụ m n’otu obodo a na-akpọ Sofia, nke dị na Bọlgeria. Ezinụlọ anyị nwetụrụ ego. Mgbe m dị afọ isii, papa m hapụrụ ezinụlọ anyị rie mbọmbọ. Ihe a wutere anyị, o mekwara ka obi gbawaa m. Ọ bịara dị m ka m̀ bụ onye a jụrụ ajụ, dịkwa m ka o nweghị onye nwere ike ịhụ m n’anya. Otú ahụ obi na-adị m mere ka m mewe isi ike mgbe m na-eto. M bịaziri na-ewe iwe ọkụ ma na-esekarị okwu.
Mgbe m dị afọ iri na anọ, m gbapụrụ n’ụlọ anyị. Nke a bụ nke mbụ m na-eme otú ahụ. Ọtụtụ mgbe, m na-ezuru ego mama m nakwa ego nne na nna m ochie. Iwe ọkụ m na-ewe na-akpatara m nsogbu mgbe niile n’ụlọ akwụkwọ. Nke a mere ka a gbanweere m ụlọ akwụkwọ ugboro ise naanị n’ime afọ ole na ole. Mgbe ọ fọrọ afọ atọ ka m gụchaa, m kwụsịrị ịga akwụkwọ. M bikwara ndụ rụrụ arụ. Ịṅụ sịga na ịṅụ wii wii bịara rie m ahụ́. M na-aṅụ oké mmanya, na-agakwa oriri na nkwari mgbe niile. M malitekwara ire ọgwụ ike. Echere m na ọ dịghị uru ọ baara mmadụ ịdị ndụ n’ụwa a ndị mmadụ na-atagbu onwe ha n’ahụhụ ma na-anwụ anwụ. N’ihi ya, naanị ihe na-adị m mkpa n’ụbọchị bụ ikpori ndụ, mgbe ọ bụla ọnwụ bịara mụ anwụọ.
N’afọ 1998, mgbe m dị afọ iri abụọ na anọ, e jidere m n’ọdụ ụgbọelu dị na Saụ Paụlo, nke dị na Brazil, n’oge m gara ire ọgwụ ike. Nke ahụ mere ka a tụọ m mkpọrọ afọ anọ.
OTÚ BAỊBỤL SI GBANWEE NDỤ M: N’afọ 2000, Ndịàmà Jehova bidoro ịbịa na-ezi ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ ebe a tụrụ m mkpọrọ ozi ọma. Ha na-abịa otu ugboro n’izu. Otu Onyeàmà Jehova aha ya bụ Marines nyeere m ezigbo aka. O mere ka m nwee mmasị ịmụ Baịbụl. Ebe ọ bụ na anụtụbeghị m banyere Ndịàmà Jehova, m jụrụ ndị mkpọrọ ibe m ka ha kọọrọ m ihe ha ma banyere Ndịàmà Jehova. O juru m anya na ọtụtụ n’ime ndị m jụrụ kwuru ihe na-adịghị mma banyere ha. Otu onye n’ime ha gwadịrị m na ọ kaara m mma ịga chọọchị ọ bụla ọzọ kama ịga Àmà Jehova. Ihe ahụ ọ gwara m medịrị ka m chọkwuo ịmata Ndịàmà Jehova. M chọrọ ịmata ihe mere ndị mmadụ ji kpọọ ha asị. M bịara chọpụta na ihe mere ndị mmadụ ji kpọọ ha asị bụ na ha bụ ezigbo Ndị Kraịst. A sị ka e kwuwe, Baịbụl kwuru na a ga-akpagbu ndị niile ji obi ha na-eme ihe Jizọs kwuru.—2 Timoti 3:12.
N’oge ahụ, ebe e kenyere m ịga na-arụ ọrụ bụ n’ọfịs ebe ndị na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ na-arụ ọrụ. Otu ụbọchị, m hụrụ ụfọdụ katọn ndị dị n’ebe a na-akwasa ngwongwo. Ihe juru n’ime ha bụ Ụlọ Nche na Teta! * ochie. M weere Ụlọ Nche na Teta! ndị ahụ gaa n’ọnụ ụlọ mkpọrọ m ma bido ịgụ ha. Mgbe m malitere ịgụ ha, ahụ́ bịara dị m ka onye akpịrị kpọrọ nkụ nke e nyere mmiri jụrụ oyi, ya aṅụọ. Ebe ọ bụ na m na-enwe ezigbo ohere, m na-agụ Baịbụl ọtụtụ awa n’ụbọchị.
Otu ụbọchị, ndị isi ụlọ mkpọrọ ahụ gwara m bịa n’ọfịs ha. M chere na ha ga-asị m lawa. N’ihi ya, m weere ihe ole na ole m nwere, feere ndị mkpọrọ ibe m aka ma were ọsọ gawa n’ọfịs ahụ. Ma mgbe m ruru ebe ahụ, ha gwara m na m ga-anọkwu afọ abụọ n’ụlọ mkpọrọ n’ihi na o nwere akwụkwọ adịgboroja a chọpụtara na m nwere.
Ná mmalite, ihe a wutere m nke ukwuu. Ma ụbọchị ole na ole ihe a mechara, m bịara ghọtawa na ihe a merenụ badịịrị m uru. Ọ bụ eziokwu na mụ amụtala ọtụtụ ihe na Baịbụl, obi m ka dị ná ndụ ọjọọ ahụ m na-ebibu, m ka chọkwara ibido ebe m kwụsịrị ma m pụta n’ụlọ mkpọrọ. N’eziokwu, ịhapụcha ndụ ọjọọ ahụ ka ga-ewe m oge.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị m ka ọ̀ bụ na Chineke agaghị ekwe ka m fewe ya. Ma m chebaara ihe e dere ná 1 Ndị Kọrịnt 6:9-11 nakwa n’ebe ndị ọzọ na Baịbụl echiche. Ebe ndị ahụ gosiri na ụfọdụ Ndị Kraịst n’oge ochie bụ ndị ohi, ndị aṅụrụma, na ndị na-apụnara mmadụ ihe tupu ha ebido ife Jehova. Ma Jehova nyeere ha aka, ha agbanwee ndụ ha. M ji ha kasie onwe m obi.
O sirighị m ike ịkwụsị ụfọdụ ihe ọjọọ ndị m na-emebu. Dị ka ihe atụ, o sirighị m ike ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ike. Ma, o siiri m ezigbo ike ịkwụsị ịṅụ sịga. O were m ihe karịrị otu afọ tupu mụ akwụsị ya. Otu ihe nyeere m aka bụ na m na-echetara onwe m nsogbu ndị ịṅụ sịga na-akpatara mmadụ. Ma ihe kacha nyere m aka ịkwụsị ya bụ na m na-ekpegara Jehova ekpere mgbe niile ka o nyere m aka.
Mgbe mụ na Jehova bịara na-adịkwu ná mma, otú ahụ obi na-adị m ka m̀ bụ onye a jụrụ ajụ ji nwayọọ nwayọọ kwụsị. Ihe e kwuru n’Abụ Ọma 27:10 ruru m n’obi. Ebe ahụ sịrị: “Ọ bụrụ na nna m na nne m ahapụ m, Jehova ga-akpọrọ m.” M bịara ghọta na enwetala m ezigbo Nna nke na-enweghị mgbe ọ ga-ahapụ m! Ndụ m enweela isi ugbu a. Ọnwa isii m pụtachara n’ụlọ mkpọrọ, ya bụ, n’Eprel afọ 2004, e mere m baptizim, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova.
URU NDỊ M RITERELA: M na-enwe obi ụtọ ugbu a. Ugbu a m kwụsịrịla ịṅụ sịga na ọgwụ ọjọọ, ahụ́ siri m ike karịa mgbe mbụ, obi rukwara m ala karịa mgbe ahụ. Alụọla m di, mụ na di m bikwa n’udo. Mụ na Nna m nke eluigwe, bụ́ Jehova, dịkwa n’ezigbo mma. E nwekwara ọtụtụ ndị m ji mere nne, nna, na ụmụnne n’ọgbakọ Ndịàmà Jehova. (Mak 10:29, 30) Obi dị m ụtọ na ha matara na m nwere ike ịgbanwe àgwà ọjọọ m tupu mụnwa achọpụta na m nwere ike ime otú ahụ.
Mgbe ụfọdụ, obi m na-ama m ikpe maka ihe ọjọọ ndị m mere n’oge gara aga. Ma ihe na-akasi m obi bụ na m maara na mgbe ụwa ọhụrụ Chineke kwere ná nkwa ga-abịa, ihe ndị ahụ na-enye m nsogbu n’obi ma m cheta ha ‘agaghị abatakwa m n’obi.’ (Aịzaya 65:17) Ka ọ dị ugbu a, ụdị ndụ ahụ m biri emeela ka m na-emetara ndị na-ebi ụdị ndụ ahụ ebere. N’ihi ya, m nwere ike ikwu na ndụ ọjọọ ahụ m biri na-enyere m aka ugbu a. Dị ka ihe atụ, ọ na-abụ m kwusawa ozi ọma, ọ na-adịtụrụ m mfe izi ndị omempụ, ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ́ ma ọ bụ ndị na-aṅụ oké mmanya ozi ọma. Anaghị m agbara ha ọsọ. Obi siri m ike na ebe ọ bụ na m gbanwere àgwà ọjọọ m ma mewe ihe dị Jehova mma, o nweghị onye na-enweghị ike ịgbanwe àgwà ọjọọ nke ya!
^ par. 29 Ọ bụ Ndịàmà Jehova na-ebipụta ha.
“N’agbanyeghị na amaghị m nna m, Baịbụl akụzierela m otú m ga-esi zụọ ụmụ nwoke atọ m mụrụ”
‘Enwetala m ezigbo Nna nke na-enweghị mgbe ọ ga-ahapụ m!’